Hoteelada ku yaal Brussels | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Guryaha, Brussels
Maanta fursadaha ay meeleyn. Hoteellada caadiga ah, codsiyada ayaa lagu daray oo u oggolaanaya kireynta guryaha ama dabaqyada ama qolalka ama helitaanka hoy iyadoo la daryeelayo xayawaanka, tusaale ahaan. Laakiin waxaa jira kuwa aan ka noqon hoteelada waana in la sheegaa in maanta in badan oo ka mid ahi ay hagaajiyeen dalabkooda iyo qaabkoodaba.
Ka fikirida markaa qaabka oo aanaan dayacin qiimaha maanta waxaan diirada saari doonaa hudheelada ku yaal Brussels.
Waxay u muuqataa taas Qiimaha magaaladan waa la dalban karaa Oo sidaas darteed, dabcan, mar kasta oo dawladda Midowga Yurub ay fadhido, qiimayaashani way kordhayaan. Marka, ma ahan fikrad xun inaad ku biirto goob raadinta hoyga si isha loogu hayo dalabyada oo aan loo seegin fursadda ah inaad degto mid ka mid ah hoteelada aan hoos ku soo bandhigno.
Haddii aad jeceshahay qaabka Mareykanka ee soo dhoweynta ka dib hal ikhtiyaar ayaa ah Hotel Aloft Brussels Schuman. Waxay leedahay raaxo cayiman, feejignaan gaar ah oo faahfaahsan, oo leh qolal waasac ah, si fiican u qalabaysan oo raaxo leh. Waxaa jira midab badan, alaab fara badan oo casri ah, sariiro loo iibiyo sida ugu raaxada badan iyo qubeys weyn. Waxaa jira bar lagu galo oo leh nolol habeennimo laakiin aan wax badan ka sugin cuntada.
Huteelkani wuxuu ku dhow yahay Place Schuman, oo aad uga fog qalbiga ugu da'da weyn uguna taariikh badan magaalada, laakiin haddii aadan raadineynin goob aad u fiican hoteelkani wuxuu ka dhigayaa masaafada qiimaha wanaagsan maalmaha fasaxa.
Deganaanshaha MAS Waa hudheel ku yaal inta udhaxeysa xaafada Yurub iyo bartamaha Brussels. Haddii aad socotid 20 daqiiqo waxaad imaaneysaa cathedral ama Matxafka Boqortooyada ee Farshaxanka Fiican. Waa dhismooyin isku dhafan, seddex, oo soo bilaabmay horaantii qarnigii labaatanaad waxaana loo cusboonaysiiyay qaab. Taasi waa sababta aad u arki doontid dabaqyada adag, qoryaha dabka lagu shido, saqafka dusha sare, iyo faahfaahinta muddada kale.
Hoteelka ayaa bixiya guryaha iyo qolalka badhkoodna waxay eegaan wadada halka badhka kalena ay eegaan jardiinooyinka dambe. Intooda badani waxay leeyihiin qaboojiye, waxaa jira wiishka oo waxaad ku bixisaa baarkinka qiyaastii 18 euro maalintii. Waxaa jira 25 unidades lagu baabtiisay magacyada noocyada qoob-ka-ciyaarka (rumba, maroojin, iwm).
hay qolal qolal iyo guryo isugu jira qolka fadhiga iyo jikada, aasaasiga ah, iyo waliba, qiime sare, waxaa jira duplex gooni ah oo leh beero yar iyo laba qol jiif. Qolalka labajibaaran waxay leeyihiin qiimo laga bilaabo 78 euro xilli hooseeya. Quraacda waxaa loo bixiyaa si gooni ah, 15 euro, laakiin WiFi waa lacag la'aan.
Ikhtiyaar kale marka la eego hudheelada ku yaal Brussels waa Hoteelka Weyn, qaabka warshadaha, hawo cayiman punk uumi, Waxaan dhihi karnaa. Wax walba waxay ku wareegsan yihiin sawir qaadashada, markaa magaca. Waxay koonfurta ka xigtaa bartamaha magaalada, xadka u dhexeeya xaafadaha koonfureed ee Saint Gilles iyo Ixelles. Waad ka lugeyn kartaa hudheelka illaa Grand Grand, oo ah wadnaha magaalada, wax aan ka badnayn nus saac oo socod ah.
Zoom waxaa loogu talagalay casaan, jaalle, sepia, madow iyo caddaan. Ku shaqeeya laba guri oo duug ah oo dib loo rogay. Soo dhaweynta waxay shaqeysaa 24 saacadood, waxaa jira sadax wiishash ah iyo waliba barxad dibadeed oo leh miisas iyo kuraas. Waxaa jira wadar ah 37 qol Aad u raaxeysan, oo lagu qurxiyay sawirrada Brussels. Dhammaantood waxay leeyihiin telefishanno, ammaan iyo miiska qaarna waxay bixiyaan goobo lagu sameeyo shaah iyo kafee.
Waxaa jira qolal waaweyn, XL, oo ​​leh sariir fadhiga, barkimooyinka barkinta, musqulaha leh taleefoonka dhulka hoostiisa mara iyo adeegga quraacda ee yar yar oo leh wax kasta oo, xagaaga, lagu qaadi karo barxadda. Baarku wuxuu mudan yahay in la soo booqdo maadaama uu leeyahay liiska 50 Beer Beljam ah iyo noocyo kala duwan oo shukulaato ah. Labada qolba lacag ayaa laga qaadaa laga bilaabo 65 euro xilli hooseeya.
Hoteel kale oo casri ah ayaa ah Hoteel Tababar. Kuwa ku waalan tareenada waa wax weyn maxaa yeelay berriga iyo aragtida laga soo qaado wadada waxaa ku yaal labo gawaadhidii hore. Midkood wuxuu leeyahay 15 qol oo raqiis ah oo la wadaago (qaata ama kireysta bacda jiifka iyo shukumaan), midka kalena wuxuu leeyahay qolal u gaar ah qaab-gadaal oo leh musqul iyo teeraar u gaar ah. Sida iska cad, waxaa kale oo jira qolal caadi ah, casri ah oo jilicsan oo ay isticmaali karaan martida, lamaanayaasha ama kooxaha.
Hoteelka ayaa quraac ka bixiya Tareenka Bistro, kaas oo sidoo kale u adeega qadada iyo cashada Arbacada illaa Jimcaha iyo sabtida ilaa Axadda. Waxa kale oo jira baar iyo aagga, the Xaafadda Schaerbeek, waxaa jira maqaayado dhowr ah. Labada qol waxay ka bilaabmaan 60 euros.
Haddii aad raadineyso wax kale oo lamid ah a Bed & Quraac markaa ikhtiyaarku waa DAAWO. Waxay ka kooban tahay lix qol oo kaliya, mid walbana waxaa ku saxiixan naqshadeeye iyo farshaxan casri ah. Hoteelka waa mid aad u ballaaran maxaa yeelay waa a daar duug ah 1840, markii dambe loo beddelay warshad beeb. Milkiilayaasheedu waxay ku dhow yihiin martidooda waxayna inta badan abaabulaan bandhigyo dahab ah ama dhacdooyin farshaxan oo ka dhaca qaybta hoose.
Hoteelku wuxuu ku yaal waddo deggan, xaafad qurux badan oo u dhow kanaalka Charleroi, oo aan ka fogeyn Boulevard de Barthèlèmy, waddo buuq badan oo firfircoon haddii ay jiraan. Haddii aad jeceshahay hudheelkan waxaad ka ballansan kartaa khadka tooska ah halkaasna waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qol kasta. Ma jiro TVHaa, iyo dhaqdhaqaaqa guud ee hudheelku waa midka B&B, sidaa darteed meelaha iyo daqiiqadaha waa la wadaagayaa. Qolalka labajibaaran waxay leeyihiin qiimo laga bilaabo 130 euro sanadka oo dhan, quraacda ayaa lagu daray iyo WiFi bilaash ah,
Ugu dambeyntiina, liistadeena hoteellada ku yaal magaalada brussels maanta waxaan ku soo gabagabeynaynaa a hoyga dhalinyarada. Waa Hurdo Wanaagsan YH, wuxuu kudhowyahay xarunta tareenka ee Gare du Nord wuxuuna kudhowyahay xarunta tareenka ee Rogier iyo socod 10-daqiiqo ah oo ka imanaya Grand Place, xarunta taariikhiga ah.
Gurigan hoyga dhalinyarada wuxuu ka shaqeeyaa a lix dabaq dhisme, casri ah oo casri ah. Hurdo Wanaagsan waa urur aan faa'iido doon ahayn, oo ku wajahan dhalinyarada illaa bartamihii 70-yadii. Shaqaalaheeda waa kuwo saaxiibtinimo leh, dhalinyaro ah, baaskiilado ayaa la kireystay, socod bilaash ah oo ku wareegsan Brussels ayaa la bixiyaa, waxaa jira kombuyuutarro bilaash ah iyo qol leh mashiinka dharka lagu dhaqo iyo qalajiyaha. Aagga la wadaago waxaa ka mid ah ciyaaro loogu talagalay is dhexgalka bulshada.
Hoteelka ayaa leh 37 qol, qaar kali kali ah, mataano iyo ilaa lix qof oo leh sariiro sariir ah. The Star, single, double and triple rooms are more standard and have a safe, qaboojiye iyo TV. Ka dib waxaa jira qolal Duplex ah oo loogu talagalay qoysaska ama kooxo ka kooban saddex ama afar qof oo leh dabaqad gaar loo leeyahay iyo qaar wata shaashad yar. Qolalka oo dhami waxay leeyihiin musqul u gaar ah.
Qiimaha waxaa ku jira go'yaal laakiin kuma jiraan tuwaallo. Quraacdu way fududahay laakiin way wanaagsan tahay. Baar ayaa ku yaal, laakiin goobtu aad bay u wanaagsan tahay oo waxaa ku yaal meelo fara badan oo wax lagu cuno laguna cabbo. Labada qolba lacag ayaa laga qaadaa laga bilaabo 69 euro xilli hoose, quraac ayaa lagu daray.
Dabcan, Brussels waxay leedahay hudheelo badan oo badan iyo noocyo hoy ah laakiin waxaa laga yaabaa inaad ka heshay mid ka mid ah liistadayada. Safar wacan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Brussels » Hoteelada Brussels
Muuqaallada ugu quruxda badan Spain
Wadanka ugu yar aduunka